Boqolaal Boqolaal ah ayaa laga daad gureeyay Dabkii ka kacay Dabkii Sardinia sida Rome oo weydiisatay Caawinta Midowga Yurub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Boqolaal Boqolaal ah ayaa laga daad gureeyay Dabkii ka kacay Dabkii Sardinia sida Rome oo weydiisatay Caawinta Midowga Yurub
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Italy War Deg Deg Ah • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Boqolaal ayaa laga daad gureeyay dabkii kaymaha Sardinia iyadoo Rome ay weydiisatay caawimaadda Midowga Yurub
Isniintii, dababkii qarxay dhammaadka usbuuca ayaa wali ku sii qulqulaya ugu yaraan 13 magaalo oo Sardiniya ah, in kasta oo ay dadaal ugu jireen ugu yaraan 11 diyaaradood oo dab-damis ah iyo shaqaalaha dab-damiska oo dhulka yaal.
Dabka dabku wuxuu baabi’iyay Sardinia-da Talyaaniga.
Boqolaal dadka deegaanka ah iyo dalxiisayaal ayaa laga daad gureeyay masiibo soo socota.
Dowlada Talyaaniga oo codsatay in Midowga Yurub laga caawiyo la dagaalanka dabka Sardinia.
In ka badan 20,000 oo hektar (50,000 oo hiktar) oo kayn iyo dhul ah ayaa ku baaba'ay jasiiradda Talyaaniga ee Sardinia iyadoo dab xoog leh uu ka kacay gobolka Montiferru ee dhanka jasiiradda dhinaceeda galbeed. Faafida waxay sidoo kale u fidday bariga gobolka Ogliastra.
Boqolaal ayaa laga daad gureeyay dabkii dabku ka kacay ee Sardinia iyadoo Rome ay weydiisatay caawimaad Midowga Yurub
Gudoomiyaha gobolka, Christian Solinas, ayaa ugu yeeray "musiibo aan horay loo arag" maadaama uu soo rogay xaalad deg deg ah Axadii.
Darbiyada dabka oo ku sii soconaya dhaadhaca buuraha Sardinia oo ku xiraya degsiimooyinka qaar, maadaama qiiq madow uu cirka isku shareerayo. Diyaaradaha dab damiska ayaa bambo ku tuuraya dabka meel mitir u dhow guryaha.
Boqolaal ka mid ah dadka deegaanka iyo dalxiisayaal ayaa laga daadgureeyay jasiiradda oo dhan iyadoo maamulku uu doonayay inuu ka ilaaliyo masiibada soo socota.
Maaddaama dab-demiyeyaasha iyo jawaab-bixiyeyaasha ugu horreeya ay u dagaallamayaan sidii loo xakameyn lahaa dabka ka kacaya maalintii saddexaad oo toos ah, dowladda Talyaaniga ee Rome waxay weydiisaneysaa Midowga Yurub caawimaad musiibo.
Majiro wax dhimasho ama dhaawac ah oo ilaa hada la soo sheegay laakiin boqolaal ido, ari, lo 'iyo doofaarro ah ayaa ku dhintay dabka maadama ay ku xayiran yihiin maqsinno ku yaal beero ku yaal waddada dabka. Isniintii, dababkii qarxay dhammaadka usbuuca ayaa wali ku sii qulqulaya ugu yaraan 13 magaalo oo Sardiniya ah, in kasta oo ay dadaal ugu jireen ugu yaraan 11 diyaaradood oo dab-damis ah iyo shaqaalaha dab-damiska oo dhulka yaal.
Howlaha gurmadka degdega ah waxaa caqabad ku noqday dabeylaha xoogan ee kulul ee wali ku sii qulqulaya jasiiradda. Axadii, Talyaanigu wuxuu weydiistay wadamada Yurub inay gacan ka geystaan ​​wax ka qabashada dabka wuxuuna si gaar ah ugu baaqay inay soo diraan diyaarado dab-damis khaas ah. Jawaab ahaan, Midowga Yurub wuxuu oggolaaday inuu diro afar diyaaradood oo Canadair ah si ay u caawiyaan Talyaaniga. Laba ka mid ah waxaa bixiyay Faransiiska halka lamaane kalena ay siisay Griiga.
Raiisel wasaaraha Giriiga Kyriakos Mitsotakis ayaa ku yiri "inta lagu jiro waqtiyadan adag, waan wada istaageynaa"